သတင်း Archives - Nainglinn
သတင်း March 12, 2022
“ဆီအပြည့် ထည့်မယ် ညီမလေး ” ဆိုပြီး အော်ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာ….
“ဆီအပြည့် ထည့်မယ် ညီမလေး ” ဆိုပြီး အော်ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာ ဆီဆိုင်ကြီး တစ်ခုလုံးက ဆီထည့်နေတဲ့ ကားပိုင်ရှင်တွေရဲ့ အကြည့်တွေက ကိုယ့်ဆီကို စုပြုံရောက်လာခဲ့တယ် မျက်နှာကိုမော့ ရင်ကိုကော့ပြီး လက်ထဲက 1 Litre ရေသန့်ဗူးခွံလေးကို…. ဆီပန့်ကိုင်တဲ့ ကောင်မလေးလက်ထဲထည့် ပေးလိုက်တယ် “ထည့်ပြီးရင် အဖုံးသေချာပြန်ဖုံးပေးနော်လမ်းမှာ ဖိတ်ကျမှာစိုးလို့ “ဆိုပြီး မှာရသေးတယ် အဟင်းဟင်း အားလုံး ရယ်မော ပျော်ရွှင် နိုင်ကြပါစေ…။ Unicode “ဆီအပွညျ့ ထညျ့မယျ…
ပူပူနွေးနွေး လက်ထပ်ထားတဲ့ချစ်ဇနီးလေးနဲ့ Liveလွှင့်ကာ ပရိသတ်တွေရဲ့မန့်ကိုပါ Replyပြန်ရင်း သဘောကျနေတဲ့ ဝေဋ္ဌုကျော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်
ပူပူနွေးနွေး လက်ထပ်ထားတဲ့ချစ်ဇနီးလေးနဲ့ Liveလွှင့်ကာ ပရိသတ်တွေရဲ့မန့်ကိုပါ Replyပြန်ရင်း သဘောကျနေတဲ့ ဝေဋ္ဌုကျော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင် အနုပညာလောကမှာလည်းပရိသတ် အားပေးမှုအပြည့်နဲ့အောင်မြင်သူ တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ခုပရဟိတအလုပ်တွေမှာလည်း ကိုယ်ကျိုးစွန့်ပြီး လုပ်ကိုင်နေတာကတော့ ဝေဋ္ဌုကျော်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူကတော့ ဝေဋ္ဌုကျော်Foundation လေးကိုတည်ထောင်ထားပြီး ပရဟိတအလုပ်တွေလုပ်ကိုင်နေတာပါ။ ပရဟိတအလုပ်ကိုပဲ သေချာလုပ်တာကြောင့် အနုပညာနဲ့တော့ဝေးကွာခဲ့တာပါ။ ဒါမယ့်လည်း ပရိသတ်တွေနဲ့ မပြတ်စေဖို့လူမှုကွန်ရက်ကနေပုံရိပ်လေးတွေကိုတင်ပေးလေ့ရှိပါတယ်။ မကြာသေးခင်ကလည်း ပရိသတ်အချစ်တော်ပရဟိတမင်းသားကြီးဟာ ချစ်သူကောင်မလေးနဲ့လက်ထပ်သွားခဲ့တာပါ။ သူ့ရဲ့ဇနီးလေးကလည်း အငြိမ့်လောက မှမင်းသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်တာကြောင့်အနုပညာသမားအချင်းချင်းလိုက်ဖက်နေတာပါ။ ခုမှာလည်း လင်မယားနှစ်ယောက် Live လွှင့်ရင်းစနောက်နေတာပါ။ သူ့တို့ကိုချစ်တဲ့…
သတင်း March 11, 2022
အခုမှပြန်ပေါ်လာလို့ဝေဖန်မှုတွေများစွာရှိနေပေမယ့်လည်း သူမကိုချစ်တဲ့ပရိတ်သတ်တွေရှိနေဆဲပဲဆိုတာကို သက်သေနဲ့တကွ ပြသလာတဲ့ ဝတ်မှုန်ရွှေရည်
သရုပ်ဆောင် အကယ်ဒမီ ဝတ်မှုံရွှေရည်ကတော့ ဆယ်စုနှစ်တစ်စုကျော်တိုင် ပရိသတ်တွေချစ်ရတဲ့ မင်းသမီးဖြစ်ပေမယ့် နွေဦးတော်လှန်ရေးမှာ ရပ်တည်ချက်မခိုင်မာခဲ့တာကြောင့် ပရိသတ်တွေရဲ့ ဝေဖန်မှုကို အပြင်းထန်ဆုံးရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံရေးရပ်တည် ချက်မခိုင်မာတဲ့အပြင် သူမရဲ့ဖေ့စ်ဘုတ်ပေ့ခ်ျဟာလည်း ဟက်ခံရတယ်ဆိုပြီး ပြောဆိုခဲ့တဲ့ ဝတ်မှုံရွှေရည်ဟာ ပရိသတ်ရှေ့မှောက်ကနေ တစ်နှစ်ကျော်ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပြီး ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အတွင်းကပဲ ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာကို ပြန်လည် အသုံးပြုလာခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နှစ်တိုင်ပျောက်ကွယ်သွားပြီး ပရိသတ်တွေသွေးအေးသွားပြီထင်တဲ့အချိန်မှ ပြန်လည်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တဲ့ ဝတ်မှုံရွှေရည်ကို ပရိသတ်တွေနဲ့တကွ နိုင်ငံရေးစိတ်ဝင်စားသူအချို့ကပါ ဝေဖန်ထောက်ပြခဲ့ပေမယ့် ဝတ်မှုံရွှေရည်ကတော့ သူမကိုအားပေးတဲ့ပရိသတ်တွေကတော့ ဒီနေ့ဒီအချိန်ထိရှိနေဆဲဆိုတာကို ပြသလာပါတယ်။ ဝတ်မှုံရွှေရည်က…
လက်ထပ်ခွင့်တောင်းဖို့ ရည်ရွယ်ထားတဲ့ လက်စွပ်လေး ဈပနသို့ယူလာခဲ့ပြီး လက်စွပ်လေးကို TANGMO ရဲ့လက်မှာ စွပ်ပေးလိုက်မယ့် BIRD
လက်ထပ်ခွင့်တောင်းဖို့ ရည်ရွယ်ထားတဲ့ လက်စွပ်လေး ဈပနသို့ယူလာခဲ့ပြီး လက်စွပ်လေးကို Tangmo ရဲ့လက်မှာ စွပ်ပေးလိုက်မယ့် Bird ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၄ ရက်နေ့ ည ၂၃ နာရီအချိန်ခန့်တွင် ထိုင်းနိုင်ငံ၏ သတင်းစာမျက်နှာများတွင် The Gone Leaf ဇာတ်ကားတွင် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသည့် ထိုင်းမင်းသမီးချော Tangmo Pattaratida သည် ရေထဲသို့မတော်တဆ ပြုတ်ကျခဲ့ပြီး သတင်းအချက်အလက်တွေအရ သူမဟာ ချောင်ပရာယာမြစ်ထဲ လှေပေါ်ကနေ ပြုတ်ကျခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။…
အိမ်က မိန်းမ ကိုကွာရှင်းပြီး နောက်အိမ်ထောင်ပြုဖို့ ခွင့်တောင်းခဲ့တဲ့ ယောက်ျား ၁ ယောက်ရဲ့ ရင်ဖွင့်စာ အိမ်ထောင်ရှိရှိ မရှိရှိ ဖတ်ကြည့်ရင် အကျိုးမယုတ်မယ့် စာ (ဘာသာပြန်) အိမ်ထောင်ရှိရှိ မရှိရှိ ဒီစာလေးကို ဖတ်ကြည့်သင့်ပါတယ် ကျွန်တော့်ဇနီး ညစာပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော်အိမ်ပြန်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ သူရဲ့လက်ကို ကိုင်ပြီး ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်။ “မင်းကိုငါ ပြောစရာရှိတယ်” သူကတော့ တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ထိုင်နေပြီး ညစာစားနေခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့မျက်လုံးတွေထဲမှာ နာကျင်မှုကို တွေ့မြင်နေရပါတယ်။ ကျွန်တော်ဘယ်ကစပြောရမှန်းတောင်မသိဘူး။ ဒါပေမယ့်…
ဝါရင့် ဟာသ လူရွှင်တော် သရုပ်ဆောင် ဖိုးဖြူ ဟာ ယနေ့ မတ်လ ၁၁ ရက် မှာ ကွယ်လွန်သွားကြောင်းသိရ
ဝါရင့် ဟာသ လူရွှင်တော် သရုပ်ဆောင် ဖိုးဖြူ ဟာ ယနေ့ မတ်လ ၁၁ ရက် မှာ ကွယ်လွန်သွားကြောင်း သိရတဲ့ အတွက် ပရိသတ်နဲ့ ထပ်တူ ဝမ်းနည်း မိပါတယ် ကောင်းရာသုဂတိ လားပါစေ သရုပ်ဆောင် ဖိုးဖြူဟာ အသည်းရောဂါဝေဒနာရှင် ပေါင်းများစွာကို စာနာစိတ်နှင့် ကယ်တင်ကူညီနေသည့် ပရဟိတသမား တယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ် ဟာသသရုပ်ဆောင် ဖိုးဖြူဟာ သူကိုယ်တိုင် အသည်းရောဂါဝေဒနာကို ပြင်းထန်စွာခံစားခဲ့ရကာ သက်သာပျောက်…
သူမဆယ်တန်းကျောင်းသူဘဝတုန်းက ဘာသာရပ်တစ်ခုမှာ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးတတိယအမှတ်အများဆုံးရရှိခဲ့ဖူးကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ ငွေတီဦး
ပရိသတ်ကြီးရေ ‌အကယ်ဒမီ ပြေတီဦး ကတော့ ရုပ်ရှင်လောကမှာ နာမည်အကြီးဆုံး မင်းသား တစ်လက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူကတော့ နိုင်ငံကျော်မင်းသမီး အိန္ဒြာကျော်ဇင် ရဲ့ခင်ပွန်းတော်စပ်သူ တစ်ဦးဖြစ်ပြီးတော့ ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ သားသား၊မီးမီး နှစ်ဦးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ မကြာသေးခင်ရက် ပိုင်းလောက် မှာပဲ ပြေတီဦး တို့ ဇနီးမောင်နှံဟာ ပုဒ်မ ၅၀၅ က နဲ့ တရားစွဲခံရပြီး လွတ်ငြမ်းနဲ့ ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပြေတီဦး ရဲ့ အချစ်ဆုံးညီမလေး ငွေတီဦး…
ရှေ့နေနဲ့ မိသားစုကိုယ်တိုင် အတည်ပြု ထုတ်ပြောလာရှေ့နေနဲ့ မိသားစုကိုယ်တိုင် အတည်ပြု ထုတ်ပြောလာတဲ့ ပိုပိုနဲ့ရဲတိုက် ကျန်ခဲ့ရတဲ့ အကြောင်းအရင်းအမှန်တဲ့ ပိုပိုနဲ့ရဲတိုက် ကျန်ခဲ့ရတဲ့ အကြောင်းအရင်းအမှန်
မဂ်လာပါ ပရိတ်သတ်ကြီးရေ ရှေ့နေကိုယ်တိုင် အတည်ပြုထုတ်ပြောလာတဲ့ ပိုပိုနဲ့ရဲတိုက် ဘာကြောင့် ကျန်ခဲ့ရသလဲဆိုတဲ့နောက်ကွယ်က အကြောင်းအရင်းအမှန် သရုပ်ဆောင် ရဲတိုက်က လွတ်ငြိမ်းခွင့်ဖြင့် ပြန်လည် လွတ်ချင်သောကြောင့် ကျန်ရှိနေသော ၎င်းအမှုကို အမြန်စစ်ဆေးပေးရန် တရားခွင်အတွင်း တောင်းဆိုကြောင်း အင်းစိန်ထောင်တွင်း သတင်းရင်းမြစ်နဲ့ ရှေ့နေတစ်ဦးက ယနေ့ ပြော ပြ ပါသည်။ သရုပ်ဆောင် ရဲတိုက်ကို ရန်ကုန် အနောက်ပိုင်းခရိုင် တရားရုံး၌ ယမန်နေ့ မတ်လ ၁ ရက်နေ့တွင် ရုံးထုတ်…
ရှတေ့နျးထှကျခှာတော့မယျ့ မငျးမျောကှနျးတှကျ ဆုတောငျးစကားလေးတှပေေးခဲ့ကွပါဦး ပရိသတျအခဈြတျော မငျးမျောကှနျးကတော့ အနုပညာမှာလညျး ကရြာဇာတျရုပျကနေ သရုပျဆောငျနိုငျသလို အနုပညာသကျတမျးတဈလြှောကျမှာလညျး နာမညျပကျြမရှိအောငျ နထေိုငျခဲ့သူဖွဈပါတယျ။ မငျးမျောကှနျးကတော့ ရုပျရှငျဇာတျလမျးတှမှောရော နှငျးဆီအငွိမျ့မှာရော အောငျမွငျခဲ့တာကွောငျ့ပွညျသူတှရေဲ့အခဈြတှကေို သိမျးပိုကျထားနိုငျသူဖွဈပါတယျ။ မငျးမျောကှနျးကတော့ မွနျမာနိုငျငံမှာ လကျရှိဖွဈပျေါနတေဲ့ လူထုလှုပျရှားမှုတှမှော ပွညျသူတှနေဲ့အတူ လူကိုယျတိုငျလညျး ပါဝငျဆန်ဒထုတျဖျောခဲ့ပွီး လူမြားနညျးတူ လူမှု့ကှနျယကျစာမကျြနှာထကျကနလေညျး ဆကျလကျပွီးတျောလှနျနဆေဲပဲ ဖွဈပါတယျ။ အခုလိုပါဝငျခဲ့တာကွောငျ့ ပုဒျမ ၅၀၅ (က) ဖွငျ့တရားစှဲဆိုခံထားရတာ ဖွဈပါတယျ။ အခွအေနအေရပျရပျကွောငျ့ တိမျးရှောငျနရေပမေယျ့လညျး…
တဈကယျအဖွဈပကျြလေးပါ ဖာခေါငျးမြားသို့ပေးစာ ယခုခတျေ လူငယျ ကြား/မ မရှေး ပွီးဆုံးအောငျ ဖတျပေးကွစလေို ပါတယျနျော. a´ ” ဟြောငျ့ ငါ့စျောဆီကအဖွရေပွီကှ “#b´ ” ဟုတျလား ” Congrats သားကွီး တဈဝိုငျးတော့ လုပျလိုကျတော့ လအနညျးငယျအကွာ……bဟြောငျ့ မငျးစျောနဲ့ ဘယျအခွအေနေ ရောကျနပွေီလဲ ” ပွောစမျးပါဦး ”aဒီလိုပါပဲကှာ ” အဆငျပွပေါတယျ ”…